आज यति धेरै घट्यो सुनको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार…… – SUDUR MEDIA
आज यति धेरै घट्यो सुनको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार……
April 25, 2021 AdminLeaveaComment on आज यति धेरै घट्यो सुनको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार……
काठमाडौँ । आज बैसाख १२ गते आइतबारको दिन नेपाली स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल प्रतितोला ४०० रुपैयाँले घटेको हो ।
गत साताको शुक्रबार तोलामा ९१ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार ९१ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भई रहेको छ । सोही परिमाणको तेजावी सुनलाई आज ९० हजार ८०० रुपैयाँ पर्नेछ ।
त्यस्तै,आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा १० रुपैयाँले घटेको छ । गत शुक्रबार एक हजार ३२० रुपैयाँ प्रतितोला कारोबार भएको चाँदी आइतबार एक हजार ३१० रुपैयाँमा कारोबार हुने महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्: तपाईका हातमा यी ४ शुभ चिन्ह छन् भने यसरी चम्किन्छ भाग्य…..हाम्राे धार्मिक शास्त्रका अनुसार हस्तरेखा शास्त्र हातका शुभ संकेतहरूले व्यक्तिको जीवनमा सुख, समृद्धि, सम्पन्नता आदिको योग प्रकट गर्दछन्। हामी हस्तस्तक (हस्त रेखा) मा स्वास्तिक, शंख, चक्र, कमल जस्ता संकेतको महत्त्व र एक व्यक्तिको भाग्यका बारे जान्नुहाेस् ।